Migrationsverket nya lagar 2016 – S P S K Å N E
Sharciyada cusub ee saamayn ku yeelanaya inaad xaq u leedahay kaalmada dhaqaale ee ay Hay’adda laanta socdaalku bixiso
Nya regler som påverkar din rätt till ekonomiskt stöd från Migrationsverket – somaliska
Waddanka Iswiidhan wuxuu baarlamaanku go’aamiyey in la beddelo sharciyada siinaya dadka magangelyodoonka ah inay xaq u leeyhiin meel ay deggaan/guri iyo kaalmada dhaqaale inta ay magangelyodoonka yihiin. Bedelida sharciyadu waxa bilaabmayaan 1 bisha juun 2016 waxaanay saamay ku yeelanayaan qofka la siiyo diidmo ku saabsan arigiisa magangelyodoonimada.
Sharciyada cusub macnahoodu waxa weeye qofka la siiyo diidmo ku saabsan codsigiisa magangelyodoonimada xaq uma laha in la siiyo kaalmada dhaqaale ee la bixiyo marka diidmada magangelyodoonimada uu helo. Kaalmada dhaqaale waxa laga wadaa tusaale ahaan lacagta maalintii la bixiyo iyo qofka deggan meelaha ama guryaha ay Hay’adda laanta socdaalku leedahay. Inaad xaq u lahaato sii deggenaanshaha guryahaas iyo in lagu siiyo kaalmada dhaqaale ee la bixiyo wuxuu kaaga egyahay marka aad hesho go’aan ku saabsan in wadanka lagaa celiyo ama lagaa masaafuriyo go’aankaas oo aan rafcaan ka qaadankarayn ama aanad dib uga dacwoonkarayn, ama marka wakhtigii laguu qabta inaad adigu si xora wadanka uga baxdo uu dhammaado. Wadanka waad ka baxaysaa adigu.
Sharciyada cusubi waxay khuseeyaan qofka weyn ee aan la deggenayn carruur yar yar oo da’doodu ka hoosayso 18 jir kuwaas oo aad adigu daryeelkooda iyo mas’uuliyadoodaba aad haysid. Waxay kaloo khuseeysaa dadka haysta go’aan ku saabsan in wadanka laga celiyo ama laga masaafuriyo inta ka horaysa 1 bisha juun 2016.
Hay’adda laanta socdaalka iyo booliiskuba waxay adiga kaa caawinayaan oo ay kaa kaalmaynayaan sidii aad uga bixilahayd wadanka Iswiidhan. Haddii aad wax caawimo u baahan tahay waxaad u laabanaysaa qaybta aad adigu ka tirsan tahay.
Warbixinno intaa dheer
Bogga internetka ee Hay’adda laanta socdaalka waxa la gelindoonaa warbixino cusub xilliga gu’ga iyo kan xagaaga sannadka 2016.
← Föreningsgalan 2016 Eid Mubarak! →